Sida loogu helo bil Paramount bilaash ah iyada oo loo marayo Apple TV | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo helo bil Paramount bilaash ah adoo isticmaalaya Apple TV
Sida loo helo bil Paramount bilaash ah adoo isticmaalaya Apple TV
Isticmaalayaasha Apple TV waxay heli karaan bil bilaash ah Paramount +, adeegga qulqulka ee hore loogu yiqiin CBS All Access, Apple ayaa Isniintii ku sheegtay barteeda twitter-ka.
Soo jeedinta tijaabada ah, oo socota ilaa Juun 30, ayaa diyaar u ah macaamiisha cusub ee Paramount+ ee Maraykanka marka ay iska diiwaangeliyaan abka Apple TV. Maadaama aysan dhammaan bixinta tijaabada bilaashka ah ee Apple TV aysan socon bil dhan, tani waa mid wanaagsan. Waa kan sida loogu dul boodo oo loo daawado Paramount+ asalka ah sida Star Trek: Picard iyo dib u bilaabay Jordan Peele ee Aagga Labaad. Adeegga daadihintu waxa kale oo uu bixiyaa filimada ka Mission: Impossible iyo Star ugu celiso faransiisyada.
Paramount+ si toos ah ayaa looga heli karaa abka Apple TV. Ama, daawadayaashu waxay iibsan karaan rukunka iyagoo isticmaalaya abka Paramount+
Waa gabal keeg ah in laga helo abka Apple TV, dabcan. Hoos eeg.
Sida loo helo Paramount+ bilaash ah muddo bil ah
Apple TV-gaaga, TV-ga smart, iPad, iPhone ama iPod taabashada ku habboon, fur Apple TV app.
Ka raadi ama raadi kanaalka Paramount+ oo taabo astaanta.
Riix barta Isku day bilaash or Rukumo Badhanka.
Haddii loo baahdo gali adigoo wata aqoonsiga Apple.
Xaqiiji macluumaadka biilasha
waad dhammaatay Daawo TV!
Dib-u-soo-celinta iyo dib-u-bilaabida
CBS All Access ayaa dib loo summeeyay oo dib loo bilaabay Paramount+ horraantii sanadkan si loo ballaariyo adeegga qulqulka ViacomCBS. Ilaa 30,000 oo qaybood oo TV ah oo ka yimid Comedy Central, BET, MTV iyo ilo kale, oo lagu daray filimo badan iyo barnaamijyo asal ah ayaa soo galay isku darka si ay uga caawiyaan ViacomCBS inay la tartanto kuwa sida NBC, HBO iyo Disney +.
Caadi ahaan, isdiiwaangelinta Paramount+ waxay ku shaqeysaa $4.99 bishii xayeysiis ama $9.99 la'aanteed. Qiimahaasi waxa uu dib u bilaabmayaa ka dib mudada tijaabada bilaashka ah ee hal bil ah.
27-ka Qalab ee Imtixaanka Waxqabadka ee ugu sarreeya ee la isticmaalo 2021
Sida Amazon Iibiyeyaashu ula dagaallamaan Kharashaadka Xayeysiiska Kor u kaca